Progressive Voice Myanmar » Elections for Ethnic Equality? A Snapshot of Ethnic Perspectives on the 2015 Elections
Home Resources Reports Resources Weekly Highlights Elections for Ethnic Equality? A Snapshot of Ethnic Perspectives on th...
October 9th, 2015 • Author: Burma Partnership/Progressive Voice • 1 minute read
In the context of the 2015 elections, the report “Elections for Ethnic Equality? A Snapshot of Ethnic Perspectives on the 2015 Elections” aims to provideasummary of what these elections mean and how the elections are perceived in ethnic nationality areas of Burma. Given that up to 40% of the population of Burma are not ethnically Burman, it is vital to present the perspectives and attitudes, as well as the political situation, in these ethnic areas in the run up to this much anticipated event.
This report finds that ethnic political parties and ethnic civil society broadly agree on fundamental issues: the need for peace, ethnic equality, self-determination, andafederal system of governance. Given the cen- tralized governance structure and the over- bearing presence and power of the Burma Army, an institution that has been at war with ethnic nationality actors for over 65 years, it is fundamental structural changes in the way that Burma is governed that will address peace, ethnic equality, self-determination and federalism, not the 2015 elections.
ဤအစီရင်ခံစာသည် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ အခင်းအကျင်းအောက် တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် ရွေးကောက်ပွဲများအရေးပါမှုနှင့် ၄င်းရွေးကောက်ပွဲများအပေါ် အမြင်သဘောထားများကို အနှစ်ချုပ်ဖော်ပြရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ၏ အနည်းဆုံး ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ဗမာမဟုတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖြစ်သောကြောင့် ၄င်းတိုင်းရင်းသားဒေသများရှိ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် အမြင်သဘောထားများနှင့် နိုင်ငံရေးအခြေအနေများကိုဤရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီကာလတွင် တင်ပြပေးရန် အထူးလိုအပ်လှပေသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တိုင်းရင်းသားတန်းတူရေး၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နှင့်ဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သို့ရရှိရန် လိုအပ်မှု စသည့်အခြေခံကိစ္စရပ်များအပေါ် တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများနှင့်တိုင်ရင်းသားအရပ်ဘက် လူထုအသိုင်းအ၀ိုင်းများတို့မှ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သဘောတူကြကြောင်း ဤအစီရင်ခံစာအရ တွေ့ရှိရပါသည်။ ဗဟိုမှ ဦးစီးချုပ်ကိုင်သည့် အစိုးရပုံစံနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများနှင့် နှစ်ပေါင်း ၆၅ ကျော် စစ်မက်ဖြစ်ပွားနေသည့် မြန်မာစစ်တပ်၏ အထက်စီးယူထားသော အနေအထားနှင့် အာဏာချုပ်ကိုင်ထားမှုတို့ကိုကြည့်လျှင် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တိုင်းရင်းသားတန်းတူရေး၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နှင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ရရှိရေးလိုအပ်ချက်တို့ကို ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကဖြေရှင်းနိုင်မည်မဟုတ်ဘဲ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်၏ အရင်းခံကျသော အဆောက်အအုံပိုင်း အပြောင်းအလဲများကသာလျှင်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။